Okwu Mgbakọ - Shandong Lanbeisite Educational Equipment Group Co., Ltd.
LONBEST Creative Writ Board
BlackBoolu LONBEST kacha mma
E guzobere LONBEST Group na 2005 ma depụta ya na NEEQ (National Equities Exchange and Quotations) na koodu ngwaahịa 832730 na 2015. Isi ụlọ ọrụ dị na Jinan, China.
Anyị bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu nke na-ewulite akụrụngwa nkuzi nke ihe ọmụmụ. A na-etinye aka n'iwebata ezighi ezi, gburugburu ebe obibi, ederede ọgụgụ isi na ngwa agụmakwụkwọ na ezinụlọ ọ bụla, ụlọ akwụkwọ na nzukọ.
Ka ọ dị ugbu a, anyị nwere ihe karịrị ndị ọrụ 400, ọrụ 28 na-arụ ọrụ na ngalaba na-elekọta, yana netwọ ahịa na-ekpuchi ógbè 31 na China, yana ihe karịrị mba iri na mpaghara niile n'ụwa.
Anyị nwere ihe ịga nke ọma wuru ụlọ akwụkwọ na-enweghị ntụ maka mmepụta LCD Writing Board na 2016, na -emepụta oge ọhụụ nke ederede na-enweghị ntụ. Mmepụta ngwaahịa na ikike dị ike na-atọ ntọala siri ike maka uto n'ọdịnihu.
Na 2018, otu a tinyere nde dollar 30 iji wuo ụlọ ọrụ mmepụta ihe na mpaghara mmepe Jibei nke Jinan, Shandong. Ihe oru ngo a di otutu puku nari puku isii na asaa.
Otu Nkwanye ugwu
Ogo; Ọrụ; Ọhụụ
LONBEST Group anọwo na-agbaso usoro amamihe azụmaahịa “Ogo mbu” kemgbe etolitela ya. Anyị na-enye ngwaahịa asọmpi site na iwu otu QC iji meziwanye usoro nyocha dị mma, iwusi njikwa dị mma, ma mejuputa nlekọta.
LONBEST elele ihe ndị ahịa chọrọ anya dị ka ebumnuche ọrụ. Ọtụtụ narị ndị ọrụ na-enye ọrụ aka na njirisi ọrụ na ịdị n'otu. Ka ọ dị ugbu a, a na-achịkwa usoro nchịkwa siri ike na ụzọ nyocha iji nye ọrụ ọkachamara, oge na oke arụmọrụ dị elu.
Otu R & D ejiriwo aka ha mepụta ọtụtụ ngwa ọrụ. Ngwaahịa a enwetawo ọtụtụ ikike nchepụta ihe, nke na-emejupụta ohere dị iche iche maka ọrụ agụmakwụkwọ n'ụlọ na mba ofesi.
Ebumnuche ịbụ ụlọ ọrụ bara uru kachasị mkpa, nke a na-akwanyere ùgwù, na nke kachasị elekọta mmadụ.
Anyị ga-aga n'ihu na-ewere ahịa ina dị ka ndị na-akwọ ụgbọala nke ọhụrụ, dịkwuo technology nnyocha na mmepe ego, na-aga n'ihu na-enye asọmpi, gburugburu ebe obibi na ahụ ike na ngwaahịa, ngwọta na ọrụ maka ezinụlọ mmụta, ụlọ akwụkwọ na-akụzi na azụmahịa enterprise, eke uru maka ndị ahịa na Bụrụ onye kasị eweta ngwaahịa na-eweta ngwaahịa na onye na-eweta ọrụ n'ọhịa nke nchebe agụmakwụkwọ ọgụgụ isi. Anyị na-akwado echiche bara uru nke imeghe, imekọ ihe ọnụ na nsonaazụ mmeri. Anyị dị njikere ikwenyere ndị mmekọ ịmegharị ihe na ịrụkọ ọrụ ọnụ iji gbasaa uru ụlọ ọrụ mmepụta ihe, kwalite ezigbo omume nke ụlọ ọrụ ahụ ma kwalite ọhaneze.
Jee Nkụzi, Rụọ Ọdịnihu
Mgbe mmepe ngwa ngwa na nkwụsi ike nke ihe karịrị afọ iri, edepụtara LONBEST na ahịa NEEQ na 2015, ma depụta ya dịka otu n'ime "ụdị ndị ọhụụ ọhụụ n'etiti ụlọ ọrụ kacha elu 100" na 2016. LONBEST na-eduga ahịa na ngalaba nke ide LCD. bọọdụ na akụrụngwa ụlọ akwụkwọ. N'ọdịnihu, anyị ga-ehiwe usoro ịre ahịa sara mbara dabere na mmepe nke ahịa ụwa. A ga-ewebata onyinye ndị pụtara ìhè karị na teknụzụ dị elu. Ebumnuche anyị bụ ịmalite ụlọ ọrụ mmepe nwere ahazi site na imeziwanye ọdịmma ndị ọrụ na ịrụ ọrụ ndị ọzọ na-elekọta mmadụ ma na-eme onyinye maka ngalaba agụmakwụkwọ na idekọ ngalaba.
8:30 ututu - 5:30 pm
@ KWESONR All Ikike niile echekwabara